टिकटक बनाउन पुलमा झु’ण्डिएका भनिएका युवक यिनै हुन्, उनको टिकटक एकाउन्ट नै नभएको खुलासा, मृ’तकका आफन्तले संगै गएका साथी माथि लगाए ग’म्भीर आ’रोप ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
टिकटक बनाउन पुलमा झु’ण्डिएका भनिएका युवक यिनै हुन्, उनको टिकटक एकाउन्ट नै नभएको खुलासा, मृ’तकका आफन्तले संगै गएका साथी माथि लगाए ग’म्भीर आ’रोप ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
December 22, 2020 AdminLeaveaComment on टिकटक बनाउन पुलमा झु’ण्डिएका भनिएका युवक यिनै हुन्, उनको टिकटक एकाउन्ट नै नभएको खुलासा, मृ’तकका आफन्तले संगै गएका साथी माथि लगाए ग’म्भीर आ’रोप ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
टिकटक बनाउने क्रममा पुलबाट खसेर ग’म्भीर घाइते भएका दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-१९ बिजौरीका २४ वर्षीय रमेश थापाको मृ’त्यु भएको छ । गत शनिबार दिउँसो सवा २ बजे तिर उनि बबई गाउँपालिका-५ पुरन्धारा झरना नजिकैको बबई नदीको झुलुङ्गे पुल मुनि झु’ण्डीएर टिकटक बनाउने क्रममा ल’डेर ग’म्भीर घा’इते भएका थिए । उपचारका क्रममा कोहलपुर मेडिकल कलेजमा आज बिहान उनको मृ’त्यु भएको हो ।
साथीहरुसंग पर्यटकीयस्थल पुरन्धारा झरनामा पिकनिक खान गएका उनीहरु बबई नदी माथिको झुलुङ्गे पुलमा टिकटक बनाउन गएका थिए । तर रमेश थापाले उत्श्रीन्खलता प्रदर्शन गर्दै पुल मुनिको सपोर्ट तारमा झु’ण्डिने दुस्साहस गरे । उनि तारमा झु’ण्डीसके पछि फर्कनलाई धेरै कोशिस गरेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ । तर उनको हात गल्दै गए पछी हात छोड्छन र २० मिटर तल बगरमा बजारिन पुग्छन ।
उनि झु’ण्डिएको माथि ५-७ जना साथीहरु पनि देखिन्छ तर उनीहरुले खासै सहयोग गर्न सकेनन । ग’म्भीर घा’इते थापालाई राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको प्रारम्भीक उपचारपछि थप उपचारका लागि बाँकेको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा रेफर गरिएको थियो । उनको टाउको, अनुहार लगायतमा शरीरका विभिन्न भागमा चो’टपटक लागेको थियो ।
टिकटक बनाउनको लागी पुलमा झु’ण्डिएको भनीए पनि रमेशको टिकटक एकाउन्ट नै नभएको खुलासा भएको छ । संगै पिकनिक गएका र पुलमा गएका साथिहरुले समेत रमेशको उद्दार गर्ने कोशिस नगरेको आफन्तको आ’रोप छ । यस विषयमा मृ’तक युवकको आफन्तसंग गरिएको कुराकानी हेर्नुहोस्ः